Fasalkayga waxaa dhigata gabar 17 sanno jir ah. Waxay noo sheegtay in ay dhab ahaantii tahay wiil. Waan ku wareeray arintaasi! Sideen ula dhaqmayaa? – Tips for refugees
Fasalkayga waxaa dhigata gabar 17 sanno jir ah. Waxay noo sheegtay in ay dhab ahaantii tahay wiil. Waan ku wareeray arintaasi! Sideen ula dhaqmayaa?
Gebi ahaanba waa arin la fahmi karo in aad ku wareertid.
Waxaan hubbaa in dhallinyaro baddani ay sidaasi dareemayaan.
Ayadu waxay kuu sheegtay arin muhiim ah oo nafsadeeda ku saabsan: waxay dareemaysaa in ay tahay wiil.
Nooca jirkeeda ma ahan nooca ay dareemayso in ay tahay.
Waxaynu jecelnahay in aynu kuu sharaxno:
Qofka aad tahay? Sida aad nafsadaada u aragtid? Midaan waa ‘shakhsiyada aad tahay’.
‘Aqoonsiga qofka’ waxaa laga wadaa nooca aad jeceshahay in aad ahaatid.
Haddii nooca aad dareemaysid in aad tahay aanan u dhigmin noocaaga jireed midaasi waxaa lagu magacaabaa:
‘Aqoonsiga-nooca’ ama ‘Nooca-qofka’.
Midaasna macnaheedu waxay tahay in qaar kamid ah gabdhaha ay dareemaan ay wiilal yihiin.
Iyo in qaar kamid ah wiilasha ay dareemaan in ay gabdho yihiin.
Qaar kamid ah dadka sidoo kale waxay dhashaan ayaga oo leh ‘labbada-xubin ee taranka’.
Midaasna macnaheedu waxay tahay in jirkooda uusan meelna u caddeyn labb ama dhedig toona.
Qaar kamid ah dadkaan ma dareemaan in ay yihiin labb ama dhedig midna.
Sidaas darteeda waxaad arkaysaa: in ay jiraan aqoonsiyo nooc baddan oo kala duwan!
Qaabka ugu wanaagsan ee la samaynayo waxay tahay in aad sii wadid ula dhaqmida sidii aad hore ula dhaqmi jirtay.
Ama waxaad ka codsan kartaa waxa ay jeceshahay ama uu jecelyahay in loogu yeero.
Tusaale ahaan, sida ayada ama asaga uu jecelyahay in loogu waco.
Posted on March 29, 2017 March 29, 2017 Author editorialteamCategories Body & Sex - Körper & Sex
Previous Previous post: Anigu waxaan ahay wiil 16-sanno jir ah saaxiib ayaana ii sheegay in gudaha dalka Jarmalka aad uga taaban kartid gabdhaha dabadooda oona midaasi laguugu ciqaabin. Midaasi ma tahay mid run ah?
Next Next post: Waxaan dhowaanahaan bilaabay in ay timo igaga soo baxaan wejigayga waxaana ahay (wiil, 14 jir ah). Codkayga waa mid ka duwan sidii hore. Waxaan dareemayaa yax-yax.